Ikhaya leHolide yaBucala eliPhumelelayo
Eli likhaya elihle, elikhulu kakhulu & elitofotofo elinemigangatho emibini leholide yabucala kwikhaya elihlala abantu elithe cwaka kumbindi weHithadhoo kwisiXeko saseAddu. Le ndawo igcwele amagumbi okulala ayi-05 en-suite kunye ne-2 ebanzi yangaphakathi yokuhlala / amagumbi okutyela
Eli likhaya leeholide labucala elihle elinemigangatho emibini elikwindawo yokuhlala ezolileyo, ngaphaya kwendlela ye-Link kwisithili saseBeiyrumathi kumbindi weHithadhoo kwisiXeko saseAddu. Le propathi izaliswe ngamagumbi okulala ayi-05, igumbi lokutyela le-gazebo kunye ne-2 ebanzi yangaphakathi yokuhlala / amagumbi okutyela anomgangatho ukuya kwisilingi evula iingcango zesilayidi ukuya kwi-terrace yeyona nto iphambili kubunewunewu beKhaya leHolide.
Ngaphezulu kwe-4,500 yeenyawo ezikwemitha yendawo yokuhlala yangaphakathi kunye ne-1,500 yeenyawo ze-square ze-terraces yangaphandle - le ndlu yindawo entle yokuphumla kunye nokonwabisa. Njengoko ipropati ihlukaniswe, ifanelekile kubantu abafuna ukuba yinxalenye yeqela, kodwa babe neendawo zabo ngexesha elifanayo. Ipropathi yonke inika imvakalelo efudumeleyo nepholileyo, iyenza ivakale ngathi likhaya kude nekhaya.
Amafulethi anikwe ngendlela yangoku kwaye abandakanya zonke izinto eziyimfuneko kubomi bangoku. Izinto zangaphakathi ezihonjiswe ngobuchwephesha, zala maxesha azidingi ndleko ukubonelela ngobunewunewu bokugqibela, ukusuka kwizixhobo zodidi oluphezulu ukuya kwezona fenitshala zitofotofo kunye nemigangatho emihle kunye nezixhobo. Iingcango zeglasi kunye neefestile ezinobukhulu obugqithisileyo zivuleleke kwiibhalkhoni ezinkulu zangaphandle, ezijonge egadini, nalapho uya kufumana iindawo zokuhlala ezahlukeneyo.
Igumbi lokuhlala elizimeleyo elinemigangatho emi-2 kwinqanaba eliphezulu yi-2000 yeenyawo zesikwere sendawo yokuhlala edibeneyo kunye nekhitshi kwaye iyafikeleleka ngezinyuko ukusuka kumnyango wabucala. Eli gumbi liphezulu libonisa igumbi lokutyela le-gazebo kunye negumbi lokuhlala elingaphakathi elijonge igadi; amagumbi amabini okulala abanzi kwaye atofotofo lilinye linendawo yalo yabucala, iibhedi zenkosi kunye neendawo zokuhlambela ze-en suite. Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle ngefriji enkulu, isitovu, ioveni kunye nemicrowave.
Inqanaba elisezantsi likwayi-2,500 enegumbi lokuhlala elikhulu elijonge igadi eluhlaza, amagumbi okulala amathathu abanzi kwaye atofotofo lilinye linebhafu ye-en-suite kunye ne-terrace yangasese, igumbi lokuhlala elahlukileyo elineesofa ezinkulu ezitofotofo, itafile yokutyela. nezitulo kunye netafile yekofu. Ukuba uthanda ukupheka, ngokuqinisekileyo uya kukonwabela indawo yasekhitshini, enkulu ngakumbi kwaye ixhotyiswe kakuhle, igcwele indawo yokutyela edibanayo, kunye neveranda engaphandle enetafile nezitulo.
Iyilwe kakuhle, le ndawo ikhethekileyo yamagumbi amahlanu angahlala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezili-10 kwaye igqitywe kumgangatho ophezulu kakhulu, ngemvakalelo yangoku kunye nekhululekileyo ebonisa ukusetwa kwayo okumangalisayo. Onke amagumbi okulala ayi-5 makhulu kwaye anobunewunewu, afakwe ngokunambitheka ngefanitshala yomthi oqinileyo, eyaneleyo eyakhelwe kwiiwadi zomoya kunye neefenitshala zomoya kunye nesilingi. Amagumbi okulala amane anandipha i-terrace yabucala enomgangatho ukuya kwisilingi evula iingcango ezivumela ilanga kunye nomoya opholileyo ukuba uqukuqele okanye utye kwindawo yabucala yegumbi lakho.
Onke amagumbi okulala anesimbo sangoku esicocekileyo nesangoku samagumbi okuhlambela e-en-suite onke agqityezelwe kwimigangatho efanayo yobunewunewu kwaye aneebhedi zobukhulu obuyinkosi ezinoomatrasi obutofotofo benkumbulo-amagwebu, kwaye sisebenzisa eyona bhedi yelinen yomqhaphu egqwesileyo, kunye neeqhiya zodidi kunye nemiqamelo. Ubuthongo obumangalisayo buqinisekisiwe!
Ukuphila / Ukutya
Amagumbi okuhlala ahonjiswe ngokumnandi aneendawo zokutyela ezinomgangatho ukuya kwisilingi ukuphakama okuvula iingcango ezityibilikayo ukuya kumathafa abucala kunye nabahlolokazi abakhulu abasecaleni bavumela izikhukula zokukhanya kwendalo. Kumgangatho ophezulu okufuphi negumbi lokuhlala kukho ithafa elikhulu eligqunyiweyo eliqhayisa ngeembonakalo ezimangalisayo zeSixeko -
Indawo egqibeleleyo yokonwabela isidlo sakho sakusasa kwaye ikwabonelela ngezitulo zegumbi lokuphumla ukuze uhlale kwaye uhlambe kwindawo ebukekayo kunye nempepho yasempuma-mpuma.
Amagumbi okuhlala alungele ukonwabisa & nokuphumla kwaye anesofa enkulu kunye netafile yokutyela ehlala abantu aba-6, izitulo, umabonakude, istiriyo, iitafile kunye nedesika. Imigangatho, njengendlu yonke, igqitywe ngeethayile ezilinganayo.
Inqanaba ngalinye linekhitshi langoku eligqibeleleyo elinazo zonke izinto eziluncedo zale mihla kwaye libandakanya izitshisi zeceramic, i-extractor hood, ifriji enkulu kunye nefriji, isinki ephindwe kabini, i-oveni / i-microwave combo, i-toaster, iketile, iishelufu ezakhelwe ngaphakathi kunye neekhabhathi zininzi, kunye nazo zonke izitya. kunye nezixhobo zasekhitshini eziyimfuneko kumpheki wegourmet. Amakhitshi akumgangatho ophezulu nawo axhotyiswe ngoomatshini bokuhlamba, isomisi, ibhodi yoku-ayina kunye nentsimbi nazo zikwabonelelwa ukuze kube lula kuwe.
Amagumbi okuhlambela ayilwe ngendlela ecocekileyo nekhoyo ngoku enesitya esikhulu sokuhlambela, isibuko esikhulu kunye neeshawa ezinamathayile ezinamathayile.
I-Crystal View ifumaneka entliziyweni yeSixeko sase-Addu eMaldives, iikhilomitha ze-478 kumzantsi we-capital city Male 'kunye nemizuzu ye-70 ngendiza yasekhaya esuka kwi-Ibrahim Nasir International Airport kwi-Male Atoll kunye ne-15 kuphela yemizuzu ye-Gan International Airport e-Addu City.
Okwangoku, umthwali welizwe iMaldivian kunye neVilla Air isebenza rhoqo ngeenqwelomoya ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Ibrahim Nasir ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseGan. Sincoma ukuba undwendwele iMaldivian okanye iVilla Air ukuze ufumane ezona shedyuli zihlaziyiweyo zilungileyo kunye nenqwelomoya.
Ngokuxhomekeke ekufikeni nasekuhambeni kwakho ixesha lenqwelomoya yamazwe ngamazwe, kungafuneka ubhukishe iiyure ezimbalwa okanye ubusuku bonke kwihotele ekwisixeko saseMale' okanye kwihotele yesikhululo seenqwelomoya.
Zonke iziqithi eAddu Atoll ziqhagamshelwe ngothotho lweendlela ezihamba phambili. Ubude bazo zonke iziqithi zeAddu bufika malunga neekhilomitha ezili-18.
I-Addu (ekwakhona neSeenu)  yeyona ndawo isemazantsi kwiiMaldives. I-Hithadhoo, ikomkhulu layo, yayisisiseko sombutho wexesha elifutshane we-United Suvadive Republic of Secessionist ngo-1959-1963.
IsiXeko saseAddu (ikhowudi yolawulo lwendawo iSeenu) sisixeko esiseMaldives esineziqithi ezimiweyo zesona siqithi sisemazantsi echwebakazi. IsiXeko saseAddu siyindawo yesibini ngobukhulu eMaldives, ngokwabemi, kwaye kuphela kwendawo yokuhlala ukufumana iwonga "lesixeko" ngaphandle kwekomkhulu, iMale'. IsiXeko sase-Addu sinezithili ezi-5. ZiyiHithadhoo, iMaradhoo-Feydhoo, iMaradhoo, iHulhudhoo kunye neMeedhoo. Ezi zahlulo ziziqithi ngokwendalo, kodwa zidibene kakuhle. IAddu Atoll ngokwayo ineziqithi ukongeza kwezi zingasentla, ezingahlali bantu.